FIPARITAHAN’NY VALANARETINA :: Maro ireo mpianatra tsy nanao fanadinana noho ny aretina kitrotro • AoRaha
FIPARITAHAN’NY VALANARETINA Maro ireo mpianatra tsy nanao fanadinana noho ny aretina kitrotro
Sakana. Taorian’ ireo mpianatra maro be voan’ny kitrotro, nisy ihany koa ireo izay tsy afaka niatrika ny fanadinana telovolana voalohany noho ity aretina ity. Anisan’izany ireo zaza mianadahy iray tampo monina eny Avaradoha.
“ Telo taona sy folo taona izy ireo. Tafiditra tao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro tsy nahafahan’izy ireo nivoaka ny trano ny fanadinana ka tsy misy azo atao fa miandry amin’ny fanadinana manaraka indray. Mbola marefo rahateo izy ireo ka mety tsy hifantoka amin’ny fanadinana ny sainy”, hoy ny renin’izy mianadahy.
Tsy ireo sekoly tsy miankina ihany fa na ny sekolim-panjakana ihany koa dia nahitana tranga toy izany. Anisan’izany ny tranga nahazo ny mpianatra iray mianatra eny amin’ny CEG 67Ha. Tsy maintsy mbola hamerina izay fanadinana izay kosa ity mpianatra ity araka ny fanazavan’ny talen’ny sekoly . Ny CEG 67Ha izay nahitana ihany koa mpianatra voan’ny aretina kitrotro.
Faritra tena mbola ahitana ny fiparitahan’ny kitrotro ny eto amin’ny Faritra Analamanga sy ny mano- didina.
Mihanaka Manodidina ny 8 864 no voamarina fa voan’ity aretina ity hatramin’ny fiandohan’ny vokatra oktobra teto Antananarivo renivohitra raha ny tatitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka . Efa mahatratra ny 15 059 izany manerana ny Nosy ary mihanaka manerana ny distrika 48.
Etsy andanin’izany, mbola maro ihany koa ireo olona no mamonjy tobim-pahasalamana raha vao misy soritr’aretina tsy mazava, noho ny tahotra ny aretina ihany. “Vao telo volana ny zanako ary mbola ho ela vao tonga ny fotoana hanaovana vaksiny azy. Nahitako soritr’aretina hafa miharo kohoka sy fanaviana nefa izy ka nentina amin’ny mpitsabo sao sanatria voan’ny kitrotro”, hoy ny renim-pianakaviana iray.
Tsiahivina fa efa manomana hetsika fanaovana vaksiny vaovao ho fiarovana amin’ity aretina ity ny eo anivon’ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny volana janoary ho avy izao.
TOETRY NY ANDRO :: Ho tsara ny andro mandritra ny fetin’ny faran’ny taona
LAPAN’NY TANANA :: Noesorina ireo tranoheva teo amin’ny Parvis Analakely